Xuquuqda caruurta | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Xuquuqda iyo waajibaadka qofka / Xuquuqda caruurta
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8 10 2018
Sawir: Johanna Nyholm, Johnér
Siyaasiinta, hey'adaha dowlada iyo maxkamaduhu mar walba oo ay go'aan gaarayaan waa in ay ka fekeraan waxa carruurta u wanaagsan.
Waalidku waa in ay carruurta u barbaariyaan si ku habboon da'dooda iyo bisaylkooda.
Ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay in arigtoodada dhiibtaan iyo in la dhegeysto. Hey'adaha dowlada iyo maxkamaduhu waxay ilmaha weyddiinayaan sida uu wax u doonayo.
Dugsiyada dalka Iswiidhan waxeey si badan uu shaqeeyaan ayagoo raacaayo isla markaana asal ka dhiganaayo sharciyada baaqaa caruurta.
Bogga internetka www.barnkonventionen.se ayaad ka akhrisan kartaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda caruurta.
BRIS (Barnens rätt i samhället) waa urur caawiyo carruurta iyo dhallinyarada welwelsan ama dhibaatooyin qaba. Lambarka BRIS ee 116 111 in la waco waa lacag la'an. Dhammaan carruurta iyo dhallinyarada da'doodu ka yar tahay 18 sano, waxay mar walba wici karaan oo qof weeyn kala hadli karaan wax kasto.
BRIS waxay kaloo caawini karaan waalidka ka welwelsan carruurtooda. Lambarka BRIS oo ay dadka waaweyn soo wacayaan waa 077-15 50 50.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga helayaa Internet: www.bris.se